The 12 Best Back Massager Nowzụta Ugbu a 2021 - Ọdịmma
The 12 Best Back Massagers That Ga-dajụọ mmụọ mgbu na-arụ ọrụ site ọnụ
12 Best Back Massagers That Will Soothe Sore Muscles
Nke a bụ ụfọdụ akụkọ na-adịghị mma maka gị: A na-eme atụmatụ nke ahụ Pasent 80 nke ndị America ga-ata ahụhụ site na mgbu azụ n'oge ụfọdụ na ndụ anyị. Thelọ ọgwụ Cleveland na-akọkwa nke ahụ ụzọ abụọ nke ndị ọrụ bụ azụ site na mgbu azụ kwa ubochi . Ow. Na ọnụọgụ ndị dị ka nke a, ọ bụghị ihe ijuanya na mgbu azụ bụ nke abụọ kacha ihe kpatara ya ndị mmadụ na-eleta ndị dọkịta ezinụlọ ha. Luckily e nwere azụ massagers aka belata erughị ala ma dajụọ mgbu.
Gịnị Na-akpata Nsogbu Ndabere?
Ọfọn, enwere nnukwu mmerụ ahụ-ihe ọ bụla site na ọdịda na ihe mberede ụgbọ ala-nke nwere ike ime ka ihe ndị dị n'azụ gị pụọ na ndọtị, n'ihi ọkpụkpụ gbawara agbaji, akwara ndị adọwara adọwa ma ọ bụ akwara na-awaji. Ibu ibu nwere ike bụrụ ihe egwu, mana naanị iguzo ma ọ bụ ịnọdụ ọdụ ogologo oge nwere ike ibute azụ mgbu. You nwere ike ịzụlite adịghị ike, nke nwere ike ibute nsogbu. Ma ọ bụ akwara dị n’azụ gị nwere ike ịda mbà site na enweghị mmega ahụ, mgbe ahụ ị ga-adọka n’ike nke mmegharị ahụ gị mgbe ị na-awụlikwa elu ozugbo na-agba ọsọ, ịnyịnya ígwè ma ọ bụ ibuli ibu. O zuru ezu iji mee ka ị na-echegbu onwe gị mgbe ị na-eche ihe niile nwere ike iduga mgbu na ihe mgbu ndị a.
Tydị ofdị Mass dị A Thereaa Dị?
Enwere ike ikewapụ ndị na - emechi azụ na ngalaba abụọ: Vibrational na shiatsu. Dr. Todd Peterson , onye bụbu onye kọleji na onye na-egwu egwuregwu bọọlụ na chiropractor dabere na Chicago, na-ekwu na mgbagha (aka vibration-powered) azụ ndị na-eme ihe ike bara uru maka mgbu ọnụ ụzọ. Dị ka Peterson si kọwaa, akwara nwere ike izipu naanị akara n'otu oge, na ụbụrụ izizi aha ngwa ngwa kachasị ngwa ngwa. Ebe ọ bụ na mkpọtụ na-agagharị ngwa ngwa karịa ahụ mgbu karịa, ọnya na-eme mkpọtụ na-ewe iwe mgbu, na-emekwa ka o siere ụbụrụ gị ike ịdebanye aha nke ọzọ, nke na-adịghị mma. Athịa aka na Shiatsu, n'aka nke ọzọ, na-elekwasị anya na ikpere miri emi, na-a attentiona ntị na isi nrụgide na ahụ. Shiatsu dị mma maka isi ihe mgbu, dị ka eriri dị n'ubu gị ma ọ bụ azụ azụ gị na-egbu mgbu; Massagers ndị na-emegharị ahụ dị mma maka izu ike izugbe nke oge dum ma ọ bụ ebe ike gwụrụ.
Kedu otu ị ga - esi ahọrọ Massager ziri ezi maka mgbu gị?
Ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ ihe dị iche iche na ihe na-akpata mgbu azụ, ọ bụghị ihe ijuanya na enwere ụdị bajillion na ụdị nke ngwaọrụ ịhịa aka n'ahụ. Họrọ nke dabara adaba maka gị bụ maka ịchọta onye na-ekwu okwu kachasị mma ebe mgbu gị na-abụkarị (ubu ma ọ bụ ala azụ?) Na ebe ị ga-eji ngwaọrụ ahụ (na-agagharị ma ọ bụ n'elu ụlọ ime ụlọ gị?). N’ebe a, mmadụ iri na abụọ kachasị mma ịhịa aka n’ego nwere ike ịzụta.
Ndị kacha mma azụ azụ nke 2021 na elele anya
Ohiri Isi kacha mma: Zyllion Shiatsu Azụ na olu aka - ilhịa aka kpụọ ($ 55)
Ntube Kacha Mma MyoStorm Na-eme ka Vhịa Aka Na-akpata Ball ($ 149)
Ego kachasị mma: Beurer Handheld Mini Isi Massager na ikanam Light ($ 12)
Kachasị mma maka ịhịa aka ike: Onye na-akpọ Theragun ($ 399)
Best Olu Ohiri Isi: HoMedics Shiatsu na ọma jijiji Isi Massager ($ 80)
Best vibrating ụfụfụ ala: Hyperice Vyper 2.0 na-eme ka ahụ dị mma nke ụfụfụ ($ 199)
Ihe kacha mma: Olu Snailax Shiatsu na azụ azụ ($ 140)
Ohiri Isi ala kacha mma: Ohuhu Electric Massager Pillow ()
Kachasị Dual okpomọkụ: HoMedics Dual Temp Percussion Pro Handheld Massager ($ 100)
Akwụkwọ ntuziaka kacha mma: Isi Back Buddy ($ 30)
Ihe kacha mma: HoMedics Ezigbo Uche Na-emetụ Aka na Aka Isi na Okpomọkụ ($ 194)
Best Mini Percussive Massager: Theragun Mini ($ 199)
Njikọ: Oriọna 10 kacha mma iji bulie ọnọdụ gị ma na-emeso ihe mwute n'oge oyi a
1, Zyllion Shiatsu Azụ na olu Massager - Nkpuchi Isi Aka
Ohiri Isi Kacha Mma
N'ihe ruru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20,000 nyocha ise na Amazon, ndị ọrụ hụrụ ụdị nkwekọrịta a maka ọdịmma ya. Na ohiri isi nke shiatsu nwekwara ọrụ ọkụ na akpaka The Bestshut-apụ mgbe nkeji 20-nke bara oke uru mgbe ị na-eme ka ụra hie ụra site na nkasi obi ya. Enwere m ọrịa ogbu na nkwonkwo siri ike, bursitis, plantar fasciitis, ubu oyi kpọnwụrụ, mgbu nkwonkwo, ụmụ ehi na-adụchi, hip na ubu edochiri, otu onye ọrụ na-ekwu. Ngwaọrụ a dị ntakịrị bụ ihe ịtụnanya maka ịtọghe akwara ma belata ihe mgbu. Ohiri isi ahụ bụ eletriki, n'ihi ya, ọ dị mkpa ka a gbanye ya ka ọ rụọ ọrụ, mana ike nke bọọlụ ndị na-agbagharị atọ, na ikike ha ịtọpụ olu, ubu na mpaghara azụ onye ọ bụla nwere 13- site na elekere itoolu, mee ka ọ baa uru. ka e kekọtara ya na eriri. (Enwekwara nkwụnye ọkụ maka ụgbọ ala.)
2. MyoStorm Nwere Mmetụta Vibrating Massage Ball Roller
Nke a Shark tank-mma ngwá ọrụ heats ruo ogo 120 na nkeji 10, maka ịhịa aka dị oke mma. Site na dayameta nke anụ ọhịa anọ, anyị nwere ekele maka otu ị ga-esi tinye ya na akwara ahụ wee setịpụ ya na nke ọ bụla n'ime ike anọ ị chọrọ. Na a mfe toggle on-anya mgba ọkụ na ruo 90 nkeji nke ọrụ kwa ụgwọ, a obi ụtọ bụ super mfe iji. Ọzọkwa, ebe ọ bụ naanị kilogram abụọ n’arọ, ọ dị nfe nke ga - ejide n’azụ gị na mgbidi, yabụ ị nwere ike pịa nwayọ nwayọ karịa etu ị nwere ike isi nọrọ ma ọ bụrụ na ị nọ n’elu ya.
3. Beurer Handheld Obere Isi Massager na ikanam LIght
Massage ego kachasị mma
Maka ndị ọrụ na-achọghị ka ajọ ifufe na-akụda na azụ ha dị nro, Nke a bụ obere aka nke dabara na aka gị wee jiri batrị AAA atọ bụ nhọrọ kacha mma. Otu nnyocha na-egosi na ngwaọrụ zuru ezu iji belata kinks na akwara mgbu mana ọ bụghị nke siri ike na ọ ga-eti gị ihe. Na sentimita anọ na dayameta, nke a ọ dịkwa obere ma dị fechaa, ya mere enwere ike ịtọgbọ ya na akpa gị ma ọ bụ ụgbọ ala gị maka ịhịa aka ngwa ngwa na-agbake ngwa ngwa mgbe ọ bụla ịchọrọ ya.
Nke kachasị mma maka ịhịa aka ike
Anyị bụ ndị mara mma obi abụọ banyere elu price isi nke na òtù nzuzo-dị ka ofufe Theragun egbe mgbugbu na-agbasi ike . Ma mgbe ahụ, anyị gbalịrị obere ọnụ ọgụgụ a, nke siri ike ma dịkwa jụụ, ma jisie ike rụọ ọrụ ngwa ngwa ma sie ike karịa ịhịa aka ndị ọzọ anyị gbalịrị. Theragun na-ekwu na nke a bụ n'ihi na egbe nwere ike inye ike ruru 40 pound nke ike ka ọ na-adị jụụ karịa brọsh eletriki eletrik-wee banye 60% n'ime akwara karịa ndị ọzọ na-eme mkpọtụ. Handdị ejiri aka na-eme ihe omume iji chọpụta, ma mgbe anyị lechara nkuzi nkuzi ole na ole, anyị nwere ike ịbanye na mpaghara nsogbu na olu, ubu na azụ. Na-eti mkpu na mgbakwunye isi mkpịsị aka, otu n'ime isi ịhịa aka n'ahụ nke ise gụnyere, n'ihi na ọ bụ ụzọ ziri ezi iji leba anya na-ebute isi na ala gị. Enwekwara ngwa Therabody nke ị nwere ike ịmekọrịta na massager gị, iji nweta aro na usoro dabere na mmemme gị na nso nso a.
Zụta ya ($ 399)
Ndina, Bath na karịrị
5. HoMedics Shiatsu na ọma jijiji Isi Massager
Best Olu Ohiri Isi
Site na ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ime ya, nhọrọ zuru oke na nhọrọ ọkụ, obere ngwugwu olu a na-agbakwunye / ịhịa aka n'ahụ HoMedics nwere ya niile. Ọnọdụ n'okpuru olu gị, na ọrụ shiatsu, ọ ga-enyere aka mepee kinks ndị ahụ ebe okporo ụzọ ma ọ bụ hunch n'elu tebụl. N'okpuru n'okpuru etiti ma ọ bụ ala azụ gị, mkpọtụ zuru ezu ga-atọpụ nnukwu akwara dị iche iche. Na okpomọkụ bụ ihe kachasị mma na tebụl ịhịa aka n'ahụ na spa. Na 24 sentimita asatọ ogologo na 19 sentimita n'obosara, ọ buru ibu buru ibu iji nweta ọtụtụ n'ime azụ gị n'otu oge, ebe ọ bụ na ọ nwere nkwụsị na-akpaghị aka mgbe minit 15 gachara, ị nwere ike ịrahụ ụra n'etiti ịhịa aka n'ahụ, nwee obi ike ị gaghị eteta nke ọma.
Zụta ya ($ 80)
Zụrụ kacha mma
6. Hyperice Vyper 2.0 Vibrating Fitness amfụfụ ala
Kachasị mma jijiji ụfụfụ ala
Ndị na-agba egwú na ndị na-eme egwuregwu amarawo kemgbe na ịmịpụ akwara mgbe ịmechara mgbatị ahụ bụ isi ihe na-eme ka ịgagharị mgbu na-adịghị na ya. Ugbu a, ndị dike izu ụka na-enwetakwa ozi ahụ, ebe ọ bụ na ụfụfụ ụfụfụ bụ ebe nkịtị ugbu a. Ihe na-abụghị ebe nkịtị bụ na-ama jijiji rollers, nke na-agbakwunye ihe siri ike iji na-agagharị. Nke a Hyperice ala nwere igwe 40 hz nwere ntọala atọ (45Hz, 68 Hz na 92 ​​Hz gbapụrụ ọsọ) nke, maka ntụgharị, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ nke ike ọkachamara ọkachamara Vitamix, aka kpụ ọkụ. Batrị ahụ na-agbanye ọkụ nwere ndụ elekere abụọ, nke kwesịrị inye gị otu izu maka izu, n'ihi na ị ga-agagharị na-aga n'ihu na nke a n'okpuru gị n'elu ala ga-ebelata mgbu akwara ma meziwanye mgbasa. Ihe nkpuchi dị na ụfụfụ bụ ihe omimi ziri ezi iji gbaa myofascial ntọhapụ na-enweghị ihe mgbu. Otu downside nke a niile vibration, dị ka otu onye na-enyocha? Vibọ ahụ dị ntakịrị ma ọ bara uru maka nsonaazụ.
Zụrụ ya ($ 199)
7. Snailax Shiatsu olu & Back Massager
Kachasị mma oche oche
Site na ntaneti kpakpando 905 ise, ngwa mgbakwunye a na Snailax dabara na oche ma ọ bụ n'ihe ndina ma na-anapụta okpomọkụ, na-emegharị igwe na ikpuchi shiatsu. Massage olu dị ịtụnanya na obere anụ ahụ na olu olu dị egwu, ka otu onye ọrụ na-akọ. Enwere ike ịkwaga pad elu ma ọ bụ ala iji kụọ mpaghara ndị ziri ezi, ọ bụ ezie na ndị na-ekwu okwu ole na ole nwere obere okwu banyere olu ịhịa aka n'olu, na-ekwu na ọ dị ha mkpa ịga n'ihu site na itinye ohiri isi n'okpuru mpe mpe akwa. N'ikpeazụ, enwere ihe mgbakwunye agbakwunyere na pad a nke dị mma maka ndị na-ahọrọ mmetụ dị nro-mid-azụ nwere mkpofu ike na-apụ iche.
8. Ohuhu Electric Massager Pillow
Ohiri Isi ala kacha mma
Ogologo njem na mgbochi okporo ụzọ nwere ike ịhapụ azụ gị ma sie ike, mana ọ bụghị site na obere a-mana-dị ike Ohuhu pillow na njikere (nke na-abịa na ihe nkwụnye ụgbọ ala). Otu onye ọrụ na-akọ, sị: Ike dị ka ịhịa aka ndụ, ọ dịkwa m mma nke ọma. Ihe dị iche iche nke Massager na-agagharị n'akụkụ abụọ ma na-agbanwe onwe ya otu oge na nkeji, iji kpochapụ kinks. Enwere eriri agbakwunyere iji kechie gburugburu isi ụgbọ ala gị, maka mkpesa metụtara olu, mana ọ bụ mpaghara lumbar a ga-eji obere nwa a mee ihe kachasị (ebe ọ bụ na nke ahụ bụ n'ezie nnupụisi na njem ụgbọ ala ogologo).
9. HoMedics Dual Temp Percussion Pro Handheld Massager
Okpomoku kacha mma
Ọ bụ ihe ijuanya na ọtụtụ ndị ịhịa aka na-enweghị nhọrọ jụrụ oyi, ebe ọ bụ na oyi nwere ike belata mbufụt na uche, ihe abụọ nwere ike ịkpata ahụ erughị ala. Moddị abụọ nwere ike ịhazigharị ọsọ ọsọ ise (dị nwayọọ na oke, ọ bụ ebe a), na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ sentimita 15 n'ogologo, nke a HoMedics ejiri ngwaọrụ ogologo aka na-enyere gị aka iru akụkụ etiti nke azụ gị nke ị na - enweghị ike iso ndị ọzọ.
Zụta ya ($ 100)
10. Isi Azu Buddy
Akwụkwọ ntuziaka kacha mma
Na Isi Azu Buddy bụ Nchikota azụ Massager / taya ígwè mbụ ahịa na 1995 na ka na-aga ike. Mana dị oke egwu: BBB, nke bụ isi mpempe akwụkwọ ike siri ike, nwere nubs na akara aka na-apụ na ya na isi ihe na-achịkwa isi ihe nrụpụta. Otu onye ọrụ na-akọ na ọ dị ka ngwa agha Klingon mana m ga-asị na enwere m obi ụtọ dị ka ọ nwere ike ịnwe nnukwu nrụgide ma banye n'ime eriri ahụ, enwekwara m eriri ruo ọtụtụ afọ n'okpuru agụba ubu m wee mee nwata nwoke a mgbochi a. n'ime ya. Ozugbo ị matara akụkụ gị, ị banye ụwa ọzọ. Akwụkwọ ntuziaka 12-peeji na-abịa na ngwa ọrụ a na-egosi otu esi ete aka nke ọma, ọnọdụ na ịhịa aka gị na mgbu gị pụọ.
Ndina, Bath & Na karịrị
11. HoMedics Cordless Ezi Aka Olu & Ubu Massager na Okpomọkụ
'Nanị ihe nwere ike ịka mma bụ ezigbo aka-na ịhịa aka n'ahụ mmadụ, otu onye ọrụ na-akọ banyere ya HoMedics Cordless True Touch Olu & Jirinụ Massager na Okpomọkụ . Ihe isi ike ị chọrọ ịhịa aka n'ahụ, ihe ijidesi ike gị kwesịrị ịdị na eriri aka. Ahụrụ m nke m n'anya! Massage a na-agbanye n'olu gị, n'adịghịkwa ka ọtụtụ ngwaọrụ ịhịa aka n'ahụ, ọ nwere obere mkpịsị aka yiri nke na-agbagharị n'akụkụ abụọ nke olu gị (ma ọ bụ spain gị, ọ bụrụ na ị kechie ya n'etiti ma ọ bụ azụ ala) iji mee ka mkpịsị aka dị ike nke onye masseur. Gwakọta nke ahụ na ọrụ kpo oku na arụmọrụ ọsọ ọsọ atọ, ma ị nwere oge ezumike na-ekwe nkwa nke ga-ewe nkeji iri na ise tupu ị mechie onwe ya.
Zụta ya ($ 194)
Obere na obere ego karịa nke ka ukwuu Theragun ụdị, a Obere bụ a kụrụ maka azụ mgbu na-arịa na-achọ ikwu ikwu portability na affordability n'emebighị na ike. Di m na-enwe ihe mgbu azụ mgbu mgbu ... ọ na-eme mkpesa nke ukwuu, ọ hụkwara na ọ na-arụsi ọrụ ike, yabụ ụfụ a bụ nnukwu nsogbu. Azutara m ya Theragun mini. Ngwaọrụ ahụ weta ahụ efe ozugbo ma ugbu a azụ ya na-adị mma karịa. Ọ na-ekwu na ọgwụgwọ ịda ụda wepụrụ eriri dị n'azụ ya. Ọsọ atọ na ndụ batrị nke 150 nkeji pụtara na ọ dị mfe iji, yana imepụta chassis dị mfe ijide mgbe ị na-agbanye n'ime ubu gị na etiti azụ. N'ezie, ọ bụkwa echiche maka iji ahụ niile, maka izu ike na mgbu mgbu, kwa.
Njikọ: Oge oyi kacha mma na-agba ọsọ, dịka ndị nwere obi ike mgbe niile n’okpuru igwe ikuku
Chọrọ ahịa kacha mma na steals zitere n'aka nri gị? Pịa Ebe a .
akụkọ ịhụnanya kachasị mma na fim Hollywood
yoga poses maka ụmụaka
ọgwụgwọ nke anụ ahụ maka oke ntutu
mgbatị na-ebelata mmega ahụ n'ụlọ
usoro dika ihe ndi ozo
kedu ka esi ejikwa ntutu daa
ntutu daa ndozi ngwọta ụlọ